Xildhibaanno uga digay Guddoomiyaha Golaha Shacabka hirgelinta Mooshinka uu hayo – Kalfadhi
Xildhibaanno uga digay Guddoomiyaha Golaha Shacabka hirgelinta Mooshinka uu hayo
135 Xildhibaan ayaa soo saartay soojeedin ka kooban 11 qodob. Waxay Goddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, uga digeen inuu ka fiirsan waayo ku adkeysigiisa Mooshinka ka dhanka ah Madaxweyne Farmaajo. “Waxaan ugu yeereynaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka in uu ka fiirsado ku adkeysiga Mooshinka buray ee sharci darrada ah, si hay’adaha dastuuriga ah looga badbaadiyo qalallaase” ayey Xildhibaannadaasi ku yiraahdeen war qoraal ah oo ay soo saareen.
Waxay sheegeen in Mooshinkaas uu yahay mid dib u dhac u keenaya, caqabadna ku noqonaya waajibaadkii sharci dajinta, matalaadda shacabka iyo korjoogteynta Golaha Shacabka ee Xukumadda, “oo dhamaantood habacsanaan ku timid” bey yiraahdeen Xildhibaannadu. Waxay dalbadeen in Kulamada Kalfadhiga 4-aad ee Golaha dib loo bilaabo. “Waxaan Guddoonka Golaha Shacabka ka codsaneynaa in kulamadii kalfadhiga 4-aad dib loo bilaabo oo la dardargaliyo fulinta waajibaadka dastuuriga ah ee Golaha hor yaalla” ayey Xildhibaannadani ku qoreen warqadda ay soo saareen.
Qodobka 3-aad ee warqaddaas ayey Xildhibaannadu ku dalbadeen in si degdeg ah loo dardargeliyo Dhismaha Maxkamadda Dastuurka. Waxay, sidoo kale, qodobka 6-aad ku dalbadeen in ay Maxkamadda Sare xeeriso Mooshinka Xil Ka Qaadista Madaxweynaha. “Waxaan ka dalbaneynaa Maxkamadda Sare ee dalka xeerinta sharciyadda mooshinkan looga been abuurtay Xildhibaanada xasaanadda iyo xurmada leh” ayaa yey yiraahdeen. Xildhibaannadu waxay doonayaan in, haddii sida ay sheegayaan ay sax tahay in laga been abuurtay Xildhibaanno, ay tahay la maxkamadeeyo kuwa been abuurtay.
Sida lagu qoray qodobka 5-aad, Xildhibaannada sheegtay in looga been abuurtay Hindisaha ka dhanka ah Madaxweynaha, Xoghayaha Golaha Shacabkuna kusoo saaray warqad, eyey sidoo kale sheegeen iney uga tacsiyeynayaan wixii gaaray. “Waxaan uga tacsiyeeneynaa Xildhibaanada sharafta leh ee laga been abuurtay, lana isticmaalay saxiixooda sidii uu cadeeyey Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka” ayaa lagu yiri warqaddooda.
Hase ahaatee, waxa ay, ugu yaraan 3 qodob oo ka mid ah 10-ka qodob ee ay soojeediyeen, ay ku garab istaageen Madaxweyne Farmaajo. Waxay sheegeen iney ku qanacsan yihiin hogaamintiisa. Xukumaddiisa ayey tilmaameen iney u arkaan iney wax fiican qabatay. “Madaxweyne, annaga oo ka tarjumeyna aqlabiyada Golaha Shacabka Soomaliyeed, waxaan ku leenahay kalsooni ayeey Aqlabiyadda Xildhibaannadu kugu qabaan ee si kalsooni lehu gudo waajibaadkaaga hoggaaminta” ayey ugu lab qaboojiyeen Madaxweynaha.
Qodobbada 7-aad iyo 8-aad ayey Xildhibannadani uga hadleen dareenka iyo doorka shacabka, sida ay u arkaan. Waxay ugu baaqeen iney la xisaabtamaan Wakiiladooda ku matala Golaha Shacabka. “Dastuurkeenu wuxuu siinayaa Shacabka Soomaaliyeed inay mar walba la xisaabtami karaan wakiiladooda” ayaa lagu yiri warqadda. Waxay shacabka ugu yeereen iney doorkooda qaataan.
Hoos ka aqriso warqadda ay ku muujiyeen soojeedinnadooda iyo sharciyadaha ay cuskanayaan.
Bayaanka Xildhibaannada u Digaya MursalDownload
Guddoomiye Mursal: In la xaddido Xildhibaannada yimaada gurigeyga wax fiican maaha
Golaha Aqalka Sare oo ka walaacsan colaadda Soomaalida iyo Oramada dhex taal